Ndị na-emepụta okporo ụzọ okporo ụzọ - China Traffic Poles Factory & Suppliers
Ọkachamara na ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ okporo ụzọ ebe ọ bụ na 2008 SGS kwadoro, ngwaahịa CE & RoHS kwadoro !!!
Ogwe ọkụ n'ụdị Octagonal
Ogwe ọkụ okporo ụzọ na-ejikọta ọnụ nwere ike jikọta akara okporo ụzọ na ọkụ mgbaàmà.
A na-ejikarị okporo osisi eme ihe na usoro okporo ụzọ.
Osisi nwere ike chepụta ma mepụta ogologo na nkọwapụta dị iche iche dịka ihe achọrọ n'ezie.
Ọkụ ndị ji ụkwụ aga 3M
Ogwe ọkụ okporo ụzọ bụ n'ezie okporo osisi maka ịwụnye ọkụ okporo ụzọ.Ogwe ọkụ okporo ụzọ bụ akụkụ dị mkpa nke mgbaàmà okporo ụzọ, ọ bụkwa akụkụ dị mkpa nke ọkụ okporo ụzọ.
Ogwe ọkụ okporo ụzọ 6.8M Octagonal
Osisi Elu: 6000 ~ 6800mm
Ogologo Cantilever: 3000mm ~ 14000mm
Isi ogwe: gburugburu tube, 5 ~ 10mm oké
Cantilever: gburugburu tube, 4 ~ 8mm ọkpụrụkpụ
Ahụ osisi: okirikiri okirikiri, galvanizing na-ekpo ọkụ, enweghị nchara n'ime afọ 20 (esere eserese na agba bụ nhọrọ)
Dayameta nke Shiled elu: Φ200mm/Φ300mm/Φ400mm
Ìhè mgbaàmà Frame okpukpu abụọ
A na-ejikarị ogwe ọkụ mgbaàmà na-akwado ọkụ mgbaàmà okporo ụzọ na okporo ụzọ, nke mere na ọkụ mgbaàmà okporo ụzọ dị n'ọnọdụ kachasị mma nke okporo ụzọ.N'ezie, ndị mmadụ na-aṅa ntị na ọkụ okporo ụzọ, ma ogwe osisi mgbaàmà, dịka nkwado maka ọkụ ọkụ, na-arụkwa ọrụ dị oke mkpa.
Ìhè nkwụsị okporo ụzọ
Ọrụ dị mma nke mgbochi mmiri
Ogwe ọkụ okporo ụzọ nwere ngụ oge
A na-ejikarị ogwe ọkụ okporo ụzọ nwere Timer na ngụ oge maka njikọ okporo ụzọ mufti-ụgbọ ala iji gosi otu ntụgharị aka ekpe, ịga kwụ ọtọ na akara aka nri.Ogwe oriọna bụ ụdị nchikota, na ntụziaka nke akụ nwere ike gbanwee dị ka achọrọ.
Akụkụ nlele sara mbara
Ọbụna nchapụta & chromatogram ọkọlọtọ
Ihe ruru okpukpu iri ogologo ndụ karịa oriọna incandescent
Ọkụ okporo ụzọ na-egbuke egbuke
Maka ajụjụ gị niile anyị ga-aza gị n'ụzọ zuru ezu n'ime awa iri na abụọ.
Ndị ọrụ zụrụ nke ọma na ndị nwere ahụmahụ iji zaa ajụjụ gị n'asụsụ bekee nke ọma.
Ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ okporo ụzọ
Ị nwere ike ịgwa anyị ngwa ngwa akaụntụ gị Mba. Ọzọkwa ị nwere ike kwụọ ụgwọ ibu ibu site Western union. Anyị ga-ezipụ sample ozugbo ozugbo enwetara gị ugwo.
oriọna akara okporo ụzọ
Ìhè okporo ụzọ ikana, akara ndị na-agafe agafe, njikwa okporo ụzọ, ngụ oge, ọkụ okporo ụzọ anyanwụ, bọọdụ akụ LED, akara ọnụahịa dijitalụ LED.
Ìhè mgbaàmà anyanwụ, Ìhè mgbaàmà okporo ụzọ, Akara ọkụ okporo ụzọ, Agba mgbama okporo ụzọ, Ìhè okporo ụzọ anyanwụ, Ọkụ okporo ụzọ na-akwado anyanwụ,